करीब एक दशक अगाडि सुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पटक–पटक रोकिने र फुकुवा हुने क्रममा छ। साझेदारी वन हुदै सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागु हुन थालेपछि चाहि वैज्ञानिक होइन दिगो वन व्यवस्थापन चाहिन्छ भन्ने आवाज उठेको छ। वहसमा प्रवेश गर्न पहिला बैज्ञानिक वनको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने बुझ्न जरूरी छ।
स्थानीय समुदायको वन व्यवस्थापनमा सहभागिता पछि जव वन श्रोतको अवस्था सुधारिँदै गयो, बनको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने बहस चल्न थाल्यो। यो मूख्यत दूइ कारणले महत्वपूर्ण थियो। पहिलो, वनले ओगटेको भूभागको दाजोमा यसको अर्थतन्त्रमा योगदान न्यून। जसले गर्दा बुढा रूख राखेर के गर्ने, बरू वन मासेर बिकाशका आयोजना संचालन गरौ भन्ने थुप्रै आवाजहरू छन्।
उदाहरणको लागि सरकारी तवरबाटै वन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, सडक वनाउने कार्यहरू प्रस्तावित र निर्माणाधिन छन्। दोश्रो, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सगै ग्रामिण अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह हुन थाल्यो। सार्वजनिक कामहरूमा स्वयंसेवी उपस्थिति घट्न थाल्यो भने वन प्रतिको निर्भरता पनि घट्दै गयो। वन पैदावारको माग घास र दाउराबाट काठतिर ढल्कन थाल्यो। उचित व्यवस्थापनको अभावमा आपूर्ति कम भै माग धान्नको लागि वन पैदावार आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ भने व्यवस्थापनको अभावमा ठिंग उभिएका रूखहरू भित्रभित्रै खोक्रिएर मुल्यहिन बनेका छन्। यसले बन क्षेत्र कतै अनुत्पादक त होइन भन्ने प्रश्न उब्जायो र वनकोऔचित्यता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो।
यी अवस्थाहरूले तमाम वन प्राविधिकहरुको मनमा आफ्नैलागि अर्को प्रश्न उब्जाएको थियो के साच्चै वनलाई श्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सकेका छौ तरु के अहिले भइरहेको वन व्यवस्थापनले स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आशातित योगदान पुर्याइरहेको छ त रु वन विज्ञानका बिध्यार्थिहरुले पढेको पहिलो पाठ भनेको “वनश्रोत” नविकरणीय प्राकृतिक श्रोत हो।
नविकरणीयको अर्थ यसको प्रयोग भएपछी पुनरुत्पादन हुनु हो। यसकारण वन श्रोत प्रयोग गरेपछि नासिएर जादैन, यो त उचीत संरक्षण र सम्बर्दन पाएमा अझ जिवन्त भएर फैलिदै जान्छ। वन प्राविधिकहरुलाइ सिकाइएको त्यहि थियो श्रोत तेती बेलासम्म श्रोत हँुदैन जबसम्म यसले मानवसमाजको कल्याणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्दैन। हाम्रो वनलाई वन श्रोत बनाउने वा वनबाट राष्ट्रिय समृद्दिलाइ योगदान पुर्याउनकोनिर्बिकल्प उपाय थियो, वनको व्यवस्थापन।
के हो दिगो वन व्यवस्थापन ?
दिगो वन व्यवस्थापनलाइ दिगो विकाशको अवधारणा सगै जोडेर परिभाषित गर्ने गरिएको छ। यसले वन व्यवस्थापन गर्दा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणिय पक्षलाइ सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। दीगो विकाश आफैमा एक प्रक्रिया हो। यसैले दिगोपना प्राप्त गर्ने क्रममा कहिले कुनै पक्ष हावी त कहिले कुनै पक्ष हावी हुन्छ। कहिले आर्थिक पक्षले बढी महत्व पाउला त कहिले वातावरणीय पक्षले। तर सबैको लक्ष्यचाहि दिगोपन नै हुन्छ। उदाहरणको लागि जुन बेला सामुदायिक वन शुरू भएको थियो, त्यो बेलाको लागि दिगो वन व्यवस्थापन भनेकै संरक्षण थियो। समय र उपभोक्ताको सहभागिता सगै वनको हैसियत बढ्दै गयो। अनि, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको लक्ष जिविकोपार्जन, सुशासनतिर ढल्किदै गयो। पछिल्लो समयमा त एक उपभोक्ता समुह एक उद्दमकोअभियान नै छेडियो।
यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा वन व्यवस्थापन हेर्ने हो भने शुरूमा साधारण वनको अवधारणामा आधारित थियो। जसमा वन क्षेत्र कटान अवधि अनुसार बराबरी भागमा बाड्ने। अनि हरेक वर्ष एक भागमा सर्पट कटान गर्दै वृक्षारोपण गर्ने। यसको मुख्य उदेश्य काठ उत्पादन थियो। पछि, बहुउदेश्यिय वनको अवधारणा आयो, जसमा वन व्यवस्थापनले जैविक विविधता संरक्षणलाइ पनि ध्यान दियो। जस अन्तर्गत वनकोकेहि भाग संरक्षणको लागि छुट्याउन थालियो। यसैगरी प्रकृतिसँग नजीक भनेर रैथाने प्रजातिको वृक्षारोपण गर्ने प्रचलन नि आयो। वन व्यवस्थापनको जस्तो सुकै अवधारणा भए पनि मुख्य कुरा भनेको व्यवस्थापन एकाइ भित्रको वन क्षेत्रमा रहेकोवनको मौज्दातलाइ घट्न नदिने हो। अर्थात, सावा घट्न नदिइ व्याजमा जिविका निर्वाह गर्ने हो।
यसकारण राष्ट्रिय निकुन्ज भित्रको संरक्षणमुखी होस् या सामुदायिक वनको निर्वाहमुखि होस् या सागरनाथ वन विकाश परियोजनाको जस्तो उत्पादनमुखी सबै नै दिगो वन व्यवस्थापन हुन्। दिगो आफैमा मूर्त रूप होइन, यो समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। यसकारण दिगो वन व्यवस्थापनलाइ समग्र सामाजिक तथा वातावरणिय फाइदा कसरी अधिकतम पार्न सकिन्छ त्यस दृष्टकोणले हेर्नु पर्दछ।
कुनैपनि समाजको सामाजिक प्राथमिकता के हुन सक्ला भनेर त्यहिका स्थानीयले निर्णय गर्ने विषय हो। न्यूनतम विन्दु भनेको उक्त प्राथमिकता पूर्ति गर्दा वनको मौज्दातमा ह्रास आउन भएन। व्याज अर्थात वृद्दिदरलाइ कसरी कटान र उपभोग गर्ने भन्ने कस्तो खाले वन सम्वर्दन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्नेमा भर पर्दछ।
के हो वन समवद्र्धन प्रणाली ?
“वन सम्बर्धन शास्त्र” वन विज्ञानको मूल कडी हो, जुन विरुवा हुर्काउने कला र विज्ञान हो। कला यस अर्थमा कि यसले कुन समवद्र्धन प्रणाली लगाउदा बनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्दछ। अनि विज्ञान यस अर्थमा कि यसले विरुवा कहिले काट्ने, कति परिमाणमा कस्तो वन पैदावार उत्पादन गर्छ भन्ने जानकारी दिन्छ। अझ यसले प्राकृतिक पुनरुत्पादन गर्ने हो भने माउ विरुवा कति को दुरीमा कतिवटा राख्ने भन्ने पनि निर्धारण गर्दछ।
वन समवद्र्धन प्रणाली विरूवा हुर्काउने, कटान गर्ने र पुनरूत्पादन गर्ने एक व्यवस्थित प्रक्रिया हो। कस्तो खाले सम्वर्दन प्रणाली अवलम्वन गर्ने भन्ने वन व्यवस्थापनको उदेश्य, वनको प्रकार र क्षेत्रफलमा निर्भर गर्दछ। यसकारण राष्ट्रिय निकुन्ज भित्रको व्यवस्थापन वन्यजन्तुको वासस्थान सुधारमा केन्द्रित हुन्छ भने सामुदायिक वनहरूको व्यवस्थापन उपभोक्ताहरूको उदेश्य परिपूर्तिमा केन्द्रित हुन्छ। कस्तो वन पैदावार निकाल्ने , कुन कुन प्रजातिलाइ जोड दिने भन्ने कुराले वन सम्वर्दन प्रणालीको निर्क्यौल गर्दछ।
उदाहरणको लागि धेरैजसो सामुदायिक वनहरूमा अवलम्वन गरिएको ढलापढा, मर्न लागेको, सुकेको संकलन गर्ने प्रणालिलाई छनौट प्रणाली भनिन्छ। सागरनाथ वन विकाश परियोजनामा निश्चित व्लकमा सबै बिरूवा कटानगरि फेरि रोपण गरीन्छ, जसलाइ सर्पट कटान प्रणाली भनिन्छ भने, मसला प्रजाति चाहि मुनाबाट पुनरूत्पादन गरिन्छ, जसलाई मुना प्रणाली भनिन्छ। हाल गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अभ्यासमा मुख्यगरि माउ रूख राखेर पुनरूत्पादित बिरूवालाई छहारी दिएर हुर्काउने व्यवस्था गरिएको छ। जसलाई सेल्टरउड प्रणाली भनिन्छ। अब माउ रूख कसरी राख्ने भन्नेले प्रणालीमा फरक पर्दछ। जस्तैः माउ वा छहारी रूख समुहमा राख्ने कि समान दुरीमा राख्ने अथवा लाइनमा राख्ने।
के वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन दिगो वन व्यवस्थापन हो ?
यो कार्यक्रमको नाम वैज्ञानिक भएता पनि यसको अर्थ चाहि अरू वन व्यवस्थापन क्रियाकलापहरू अवैज्ञानिक भन्ने चाहि होइन। विगतमा गरिरहेको वार्षिक स्वीकार्य कटान, जुन वार्षिक वृद्दिदर भन्दा कम हुन्छ, दिगो उत्पादनको ढाचा नै हो। जसले सबै वैज्ञानिक पद्दति अवलम्वन गरेको छ। आफुले वर्षौ मिहिनेत गरेर जोगाएको वन कटान गर्न पर्दा उपभोक्ताहरू एकातिर तत्पर नहुने र अर्को तर्फ उपभोक्ताहरूको स्वयंसेवी सहभागिता न्यून वन्दै गएको अवस्थामा वन व्यवस्थापन जटिल बन्दै थियो। खाली ढलापढा संकलन र झाडी सफाइमा नै सिमित वन व्यस्थापन क्रियाकलापलाइ कसरी उत्पादनमुखी बनाउने र उपभोक्तालाई पनि आकर्षित गर्न सहज होस भन्ने उदेश्यले यसको नाम वैज्ञानिक नामांकरण गरिएको देखिन्छ।
हाल अभ्यासमा भएको वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापनमा वनको कटान चक्र अवधिअनुसार ब्लकमा विभाजनगरि वार्षिक रूपमा समान क्षेत्रफलमा कटान गरिन्छ। कटान गर्दा पुनरूत्पादनलाइ प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्न ठाउँ ठाउँमा माउ रूख छाडिन्छन्। यसमा पनि वार्षिक वृद्धिदरभन्दा कम नै कटान गर्ने गरिन्छ। यसको साथै प्राकृतिक प्रकोपको संवेदनशिलता र आवश्यकिय वातावरणीय सेवाहरूको प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर संरक्षित क्षेत्र पनि छुट्याउने गरिएको छ। खाली पहिलाको अभ्यास भन्दा फरक भनेको चाहि एकै स्थानमा कटान गर्नु हो। जस्ले कटानलाइ व्यवस्थित र छरितो बनाउछ भने अर्कोतर्फ एकै ठाउमा कटान गरिने भएकोले यातायात खर्च नि वचत हुन्छ।
पहिलाको अभ्यासमा वनभरी जहाँजहाँ ढलापढा, सुकेका छन त्यहा कटान गर्दा वनको अवस्थामा फरक देखिन्नथ्यो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा उत्तिकै मात्रामा तर एकै ठाउमा काटिने भएकोले विनाश भयो कि भन्ने हो। तर एकै ठाउँमा कटान गर्दा लागत कम हुनको साथै पुनरूत्पादनको वृद्दिदर पनि राम्रो हुन्छ जसले वनको उत्पादकत्व बढाउँछ। यसका साथै नेपालमा आगो र चरिचरणबाट संरक्षण गर्नसके प्राकृतिक पुनरूत्पादनमा समस्या नहुने हुनाले १र२ वर्ष बिरूवा नदेख्दा पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन किनकी साधारणतया साल प्रजातिले औसतमा ३÷३ वर्षमा राम्रो विउ उत्पादन गर्दछ। यसकारण अहिले अभ्यासमा भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि दिगो वन व्यवस्थापन कै एक मोडल होभन्दा फरक पर्दैन।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका सवालहरू
वैज्ञानिक वनको अवधारणामा अस्पष्टता नभएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने केहि समस्या पक्कै देखिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनको लागि समुह र वन भित्र क्षेत्र छनौट गर्दा घना विरूवा भएको मात्र छनौट गरिएकोले कतिपयले नियतमा खोट लगाएका छन्। अझ, हैसियत विग्रिएको क्षेत्रमा पुनरूत्पादन स्थापना वा वृक्षारोपणको कार्य तत्कालै नगरिदा कतै वैज्ञानिक वन भनेको रूख अझ त्यो माथि पनि साल काट्ने कार्यक्रम त होइन भन्ने आशंकाले पनि बुझाइ फरक पारेको भेटिन्छ। यसकारण उत्पादन र संरक्षणलाई सगसगै लैजानुपर्दछ।
अर्कोतिर, व्यवस्थापन योजनाले कटान चक्र अवधिभरको अवस्था निर्क्यौल गर्नुपर्ने र फेरि १० वर्षे कार्ययोजना विस्तृत रूपमा बनाउनुपर्ने भएकोले शुरूवातमा यो खर्चिलो छ। यसकारण कार्ययोजना बनाउन उपभोक्ता समुहले ठूलो रकम कसरी जोहो गर्ने भन्ने पनि सवाल छ। यसकारण, यो व्यावसायिक योजना भएकोले निर्माण गर्न उपभोक्ता समुहलाई डिभिजन स्तरमा एक वन व्यवस्थापन कोष खडागरी ऋृण उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ। पहिलोपटक वनाइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना जति खर्चिलो पछिल्ला योजनाहरू कम्तिमा एक कटान चक्र अवधिका लागि हुने छैनन्।
अर्को सवाल भनेको, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले कतै भ्रष्टाचार त बढाउँदैन भन्ने आशंका पनि छ। यो सुशासनका पाटा हुन्। सुशासन कायम गर्न नसक्दा दिगो वन व्यवस्थापन नै भनेर शुरू गरीएता पनि यो त चलिनै रहन्छ। कतिपय समुह त के राज्य कै पनि खर्च गर्ने क्षमतामा बारम्वार प्रश्न उठेकै छ। यसकारण वन व्यवस्थापन योजना सँगै कोष परिचालनको योजना पनि अनिवार्य देखिएको छ।
वनको उचित व्यवस्थापन अभावमा धेरै प्रश्नहरु वन प्राविधिक सामु तेर्सिएका थिए। वन सँगै सुन्दर भविष्यको कल्पना साचेर संरक्षणमा जुटेका ग्रामिण समुदायमा वनले आशातित भूमिका खेल्न सकेन, किन रु देशको ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्छ, किन रु वनको नाप जाँचगरी औषत वार्षिक वृद्धिदर भन्दा कम काट्ने पद्दति थियो। जुन अझैपनि सामुदायिक वनहरुमा प्रचलित नै छ।
अझ बुढा, सुकेका, रोग लागेकाहरु मात्र काट्नुपर्ने प्रावधान छ। यसबाट केहि मात्रामा स्थानीय स्तरमा वन पैदावारको आपूर्ति त भयो, तर यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समय सापेक्ष सुदृढ पार्नकुनै योगदान दिन सकेन। यहिकारण हुन सक्छ। आर्थिक लाभको लागि समुदायमा आधारित वनहरुमा पनि जथाभावी रुख काटिने गतिविधिको बढावा हुनु। यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
विवादहिन रुपमा भन्नुपर्दा अहिले वन पैदावारको माग र आपूर्ति बीच ठुलो खाडल रहेको छ। बढ्दो जनसंख्या र शहरीकरणले वन पैदावारको मागलाई अझ बढाउनेमा कुनै विवाद नहोला। अझ वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढिरहेको अवस्थामा परम्परागत वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई पछ्याउने हो भने वन पैदावारको आयातको आयतन अझै बढ्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। वन समवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन क्रियाकलापले वनको हैसियत सुधार्ने कुरामा दुइमत छैन।
वन विनास भनेको सुशासनसँग सम्वन्धित छ। यसमा वन कार्यालय र उपभोक्ता समुहरूको संचालनले भूमिका खेल्दछ। यसको अभावमा विगतमा बन्दुकको घेराभित्र पनि वन नासिएको थियो, वार्षिक वृद्धिदर भन्दा कम निकाल्दा पनि लोभी मन हुनेहरुले रुख सुकाएर भएपनि ढालेकै थिए। यसैले, आज वैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन नगर भन्दा अनुकरणिय कार्य गरेका समुदायहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ।
यसकारण, वन व्यवस्थापन प्रणालीभनेको प्रविधि हो जसले बनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउछ।वन विज्ञान वन सम्वर्दन शास्त्रमा निहित छ न कि कुनै राजनिति शास्त्रमा। त्यसैले बन व्यवस्थापन प्रणाली र सुशासनलाई एकै ठाउमा मिसाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्न खोज्नु जस्तो अवैज्ञानिक निर्णय कुनै हुने छैन।
कार्यक्रमको नामांकरणले विवाद ल्याएको हो भने सम्वन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। तर अकाट्य सत्य चाहि के हो भने पूर्ण संरक्षणमा भन्दा व्यवस्थित वनमा जैविक विविधता पनि बढी हुन्छ। दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कुन पक्षलाई महत्व दिने भन्ने राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकतालाइ ध्यानमा राखी निक्र्यौल गर्नु पर्दछ।
(लेखक वातावरणिय अर्थशास्त्री हुन)